आत्मानन्द कपः फिदिमलाई पराजित गर्दै माङसेबुङ फाइनल प्रवेश — Harpraharnews.com
आत्मानन्द कपः फिदिमलाई पराजित गर्दै माङसेबुङ फाइनल प्रवेश
१५ मंसिर २०७८, बुधबार December 1, 2021 हरप्रहर न्युज
माङ्सेबुङ । इलामको माङसेबुङमा जारी आत्मानन्द कपको १४औं संस्करण फुटबल खेलकुद प्रतियोगितामा फिदिम स्पोर्टिङ क्लब पाँचथरलाई पराजित गर्दै माङसेबुङ खेलकुद विकास समिति फाइनल प्रवेश गरेको छ ।
माङसेबुङ खेलकुद विकास समितिका खेलाडीहरू सामुहिक तस्वीर खिच्दै । तस्वीर:आन्छुमि नसान
निर्धारित समयमा १–१ गोल गर्दै बराबरी खेलको माङसेबुङले ट्राइबेकरमा नतिजा आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भएको थियो ।
खेलमा पहिलो हाफको थप समयमा माङसेबुङको तर्फबाट जर्सी नं. ७ का प्रविण राईले गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएको थियो ।
फिदिम स्पोर्टिङ क्लब पाँचथरका खेलाडीहरू सामुहिक तस्वीर खिचाउँदै । तस्वीर:आन्छुमि नसान
खेलको ५३ औं मिनेटमा फिदिमका लागि सुमन लिम्बुले गोल गर्दै नतिजा बराबरी बनाएका थिए । निर्धारित समयमा नतिजा बराबरी भए पछि खेल ट्राइबेकरमा धकेलिएको थियो ।’
खेलको म्यान अफ दि म्याच माङसेबुङका जर्सी नंं. ७ प्रविण राईले प्राप्त गरे । उनलाई नगर ५ हजार सहित प्रमाण पत्र र मेडल प्रदान गरिएको थियो ।
प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलिको अन्तिम सेमिफाइनल खेल श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लब मोरङ र भाङबारी फुटबल क्लब (बिबिएफसी) दमकबीच हुने समितिका सचिव सरिता राईले बताइन् ।
प्रतियोगितामा पूर्वका इलाम, पाँचथर, झापा, मोरङ, सुनसरी र भारतको दार्जिलिङ गरी ८ टिमको सहभागिता रहने समारोह खेलकुद विभाग आत्मा पवित्र हक्चात यक्चुमका अध्यक्ष मनकुमार आङबुहाङले बताए ।
प्रतियोगिताका विजेता टिमले नगद ३ लाख १ सय ६८ रुपैयाँ र उपविजेता टिमले नगद २ लाख १ सय ६८ रुपैयाँ सहित ट्रफी र प्रमाणपत्र पाउनेछन् । त्यस्तै सर्वाधिक गोलकर्ता, उत्कृष्ट गोल रक्षक, उत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट डिफेण्डर, उत्कृष्ट स्ट्राइगर, उत्कृष्ट मिडफिल्डर, उदयमान खेलाडी, अनुशासित खेलाडी, बेस्ट कोचलगायतलाई पनि उचित नगद पुरस्कारबाट सम्मान गरिने आयोजकले जनाएको
अध्यक्ष आङबुहाङका अनुसार प्रतियोगितामा माङसेबुङ गाउँपालिका खेलकुद समिति इलाम, गोधुली क्लब धरान सुनसरी, फिदिम स्र्पोटिङ क्लब पाँचथर, झापा–११ झापा, बीबीएफसी दमक झापा, रेडहर्ष इलाम, माने भञ्ज्याङ फुटबल क्लब दार्जिलिङ भारत र श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्बल मोरङको सहभागिता रहेको छ ।
आत्मानन्द कप: आज बिबिएफसी दमक र श्रीजंङ्गा मोरङबीच अन्तिम सेमिफाइनल खेल हुदै